Försäkrings­kassan oo baaritaan ku haysa dadka iyo shirkadaha qiyaana sanduuqa caymiska | Somaliska
Hay’ada caymiska dadweynaha (Försäkrings­kassan) ayaa mudo ka badan 1 sano waxay baaritaan balaaran ku haysay shirkado iyo shaqsiyaad badan oo looga shakisanyahay in ay qiyaameen taageerada ay bixiso hay’ada.
Försäkrings­kassan ayaa sheegtay in lacag balaayiin karoon ah ay lunsadeen shirkado lagu qiyaasay 26 shirkadood iyo dad shaqsiyaad ah oo fara badan. Baaritaanka shirkadaha ayaa ku saabsan in shirkadahaan ay ku shaqeeyaan caawinta dadka taasoo keenta in lacag looga qaado Försäkrings­kassan. Waxaa dhacda in dadka qaarkood ay qortaan in ay xanuunsanyihiin iwm oo sidaas dhowr qof loogu shaqaalaysiiyo.
Arin kale oo iyadana ka yaabisay Försäkrings­kassan ayaa ah in dadka shaqaale ahaan loo qoray oo warqado heshiis loo soo bandhigay Försäkrings­kassan aysan wax lacag mushaar ah qaadan. Arintaan ayaa ka dambaysa qiyaano ay sameeyaan shirkadaha oo qofka si been abuur ah shaqo ugu qora balse aan wax lacag ah siinin. Hada ayaa la filayaa in dhowr boqol oo qof maxkamad la soo taago.
Dhinaca kale dadka shaqsiyaadka ah ayaa iyagana baaritaan lagu hayaa, iyadoo Försäkrings­kassan ay dabagal ku hayso lacagaha yaryar ee dadku qaataan sida lacagta caruurta, lacagta aabe la’aanta iyo taageerada kale ee ay bixiso hay’ada. Mid ka mid ah shaqaalaha Försäkrings­kassan oo qaabilsan baaritaanka ayaa sheegay in uusan waligiis ku fikirin in ay arki doonaan qiyaanada hada ay arkeen.
Xitaa waxaa la soo bandhigay in dad badan iyo shirkado ay lacagaha wadamo kale u dirsadeen, kuwaasoo qaarkood aysan Försäkrings­kassan ka soo celin karin lacagtii. Dadka lagu helo in ay qiyaameen sanduuqa caymiska ayaa ugu horayn laga doonayaa in ay soo celiyaan lacagtii ay qaateen, halka qaar kale maxkamad la saari doono oo laga yaabo in xabsi lagu xukumo.
Waxay ila tahay in qofii amase shirkadii ay ku cadaato qayaanadan maxkamad lasoo taago xabsi dheerna lagu xukumo iyo iney lacagtana dib usoo celiyaan si ay cashar ugu noqoto kuwa weli kusii fekeraya iney wax qiyaameeyaan.
Real waa wax yaab badan dadyowga arkina subshay.
Tuugo meel walbay joogtaa! Walaal garanay kuwa kutalagalay ee wax xadday. Ee kuwa aan wax ogayn, ama sharciga kawarqabin see layeelaa? sida soomaalida?
RUNTI XAFISKA CAYMISKU BULSHADA HAWL XOOGBADAN AYUU U HAYA HADII ASAGA LA QIYANA WA DHIB WAYN WAYO WAA QOF IS QIYAMAY WAYO KAMA MAARANO BULSHADA HADAN NAHAY MARKA SEE QOF ISKU QIYAMIKARA AYAN U ARKA ARINKA XAFIISKA CAYMISKA, WAX FIICAN MAHAN QIYAANIILE KASTANA MAXKAMD INLASARO WAA ABAALKIIS
asc walalahay somaliyaad meel walba aad joogtiin waan din salamay